Wyoming LLC ၏အကျိုးကျေးဇူးများ - အကုန်အကျသက်သာသောပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ခြင်း
Wyoming LLC အကျိုးကျေးဇူးများ
အဘယ်ကြောင့် Wyoming LLC ဖွဲ့စည်း?
သင်သည်အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးပိုင်ရှင်သို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သင်သည်မြင်းစီးခြင်းသင်ခန်းစာပေးသည်၊ သို့မဟုတ်အိမ်များကိုရောင်းသည်သို့မဟုတ်မွေးနေ့ပွဲများ၌မှော်အတတ်များကိုပြနိုင်သည်။ သင်သည်ကွန်ပျူတာပညာရှင်၊ အမှတ်စဉ်လုပ်ငန်းရှင်သို့မဟုတ်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ရရှိရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများမည်သို့ပင်ရှိနေပါစေ၊ သူ့စားပွဲပေါ်မှညစာစားရန်လိုအပ်နေသည့်ရှေ့နေအချို့ရှိသည်။ သင့်ထံမှ၎င်းကိုသင့်ထံမှယူဆောင်သွားလိုသည်။
သင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုရန်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေချိန်တွင်သင်စိတ်ပူရန်လိုသည့်နောက်ဆုံးအရာမှာသင်၏ဘဏ္ancesာရေးကိုလုံခြုံအောင်ထားခြင်းနှင့်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အနာဂတ်အတွက်သင်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ထားရမည်။ အဲဒီမှာတစ်ခုဖွဲ့စည်းရှိရာပါပဲ LLC သည် LLC စတင်ခြင်းသည်သင်၏စီးပွားရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွင်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ဘယ်တော့လဲ ပြည်နယ်တစ်ခုရွေးချယ်ခြင်း မင်းလိုချင်တယ် LLC အတွက်အကောင်းဆုံးပြည်နယ် ဖွဲ့စည်းခြင်း, အဖြေကိုရိုးရိုးလေး: Wyoming ။
“ LLC” ဟူသောဝေါဟာရသည်လီမိတက်တာ ၀ န်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီကိုဆိုလိုသည်။ အားဖြင့်စာအုပ်၌တည်၏ နိုလို, အန်သိုနီမန်နူဆိုက LLC သည်ရိုးရာစီးပွားရေးပုံစံငါးခုထက်လူကြိုက်များသောအခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုရှင်းပြသည်။ ထိုမော်ဒယ်များတွင်တစ် ဦး တည်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ အထွေထွေလက်တွဲမှု၊ အကန့်အသတ်ရှိသောလက်တွဲမှု၊ C (ပုံမှန်) ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် S ကော်ပိုရေးရှင်းတို့ပါဝင်သည်။
အခြားစီးပွားရေးအဆောက်အအုံများနှင့်မတူသည်မှာ LLC သည်အထူးသဖြင့်တရားဝင်နှင့်အခွန်ဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တစ် ဦး ချင်းစီအားရည်မှန်းချက်နှစ်ခုကိုလျင်မြန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာအောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ပထမဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး စွာပိုင်ရှင်သည်“ ဖြတ်သန်း” အခွန်ကုသမှုကိုခံစားသည်။ ဒုတိယအချက်မှာသူသို့မဟုတ်သူမသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာတာ ၀ န်ယူမှုကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်ရရှိသည်။ “ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ” အခွန်ကုသမှုသည်တစ် ဦး တည်းပိုင်ရှင်များသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်ပိုင်ရှင်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလည်းနှစ်သက်ကြသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာ ၀ န်ခံမှုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာကာကွယ်ခြင်းသည်ကော်ပိုရေးရှင်းပိုင်ရှင်များသာအကျိုးအမြတ်ခံစားသည်။
တစ် ဦး ကလူတစ် ဦး LLC perfectlyုံလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်စုပိုင်ဆိုင်မှုသည်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအုပ်စုငယ်သည်ဆက်လက်တည်ရှိသင့်သည်။ ပိုင်ရှင်အုပ်စုကြီးများသည်ပိုင်ရှင်များအကြားဆက်သွယ်မှုနှင့်အပြည့်အဝသဘောတူညီမှုရရန်အခက်အခဲများကြုံတွေ့နိုင်သည်။ LLC တစ်ခုသည် LLC အတွင်းရှိဘဏ္ancesာရေးကို၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်သောအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ခွဲထုတ်သည်။ ဒါကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေကကုမ္ပဏီကပေးတဲ့ကြွေးမြီတွေ၊ ဒါကြောင့်တစ်စုံတစ်ယောက်ကပေးဆပ်တာတွေအတွက်တာဝန်မရှိပါဘူး။ ပိုင်ရှင်များဆုံးဖြတ်သည့်တိုင်အဖွဲ့ဝင်များသည်အမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုခွဲဝေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အသင်းဝင်များကသဘောတူသော်လည်းအကျိုးအမြတ်ကိုသင်ခွဲဝေနိုင်သည်။ အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ပိုင်ဆိုင်သော LLC ၏ပမာဏအပေါ်တွင်သာ မူတည်၍ အမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုခွဲရန်မလိုအပ်ပါ။ အဖွဲ့ဝင်များသည်ငွေသား၊ ပစ္စည်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ် LLC ရှိအရင်းအနှီးအကျိုးစီးပွားများအတွက်လဲလှယ်ပေးမည်ဟုကတိပေးနိုင်သည်။
အဆိုပါ Wyoming LLC Way ကို
သင်အလေးချိန်ပြီးနောက် အကောင်းအဆိုး cons LLC တည်ထောင်ခြင်းသည်သင့်အတွက်သင့်တော်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ပြီးသည်မှာယုတ္တိအရှိဆုံးအရာမှာသင်၏ LLC ပြည်နယ်ကိုအခြေစိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ မင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာဒီနေရာမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ သင် Wyoming တွင်နေထိုင်ပြီးမှမဟုတ်လျှင်အိမ်တွင်နေခြင်းအားဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးအချို့ကိုသင်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။ သင့်အိမ်အခြေအနေထက်သင်၌ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည် - သို့သော်အဘယ်အရာက Wyoming ကိုအလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားစေသနည်း။
တစ် ဦး ဇာတ်လမ်းတွဲ၌တည်၏ အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသတင်းရီးရဲလ်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကွန်ယက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ကေသီဖက်တီက LLCs အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးပြည်နယ် ၃ ခုဖြစ်သော Nevada, Delaware နှင့် Wyoming တို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် LLCs ဖွဲ့စည်းရန်ပထမဆုံးပြည်နယ်အဖြစ် Wyoming သည် LLCs နှင့်ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိခဲ့သည်။ မြင့်မားသော privacy နှင့်ကုန်ကျစရိတ်နည်းခြင်း၏ဂုဏ်သတင်းကြောင့်ပညာရှင်များသည်ယနေ့တိုင်ယင်းကိုတန်ဖိုးထားဆဲဖြစ်သည်။ တစ်ခုရွေးချယ်ရာတွင် နီဗားဒါး vs LLC WyomingWyoming အသင်းဝင်များသည် ပို၍ လုံခြုံမှုနှင့်အမည်ဝှက်ခြင်းကို ပို၍ ခံစားနိုင်သည်။ LLC အဖွဲ့ဝင်များနှင့်မန်နေဂျာများကိုအဖွဲ့အစည်းဆောင်းပါးများတွင်ဖော်ပြရန်မလိုပါ။ ထို့အပြင် "life proxy" တစ်ခုကိုလည်းရွေးနိုင်သည်။ တစ်သက်တာ proxy သည် LLC မှအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး အား LLC တွင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန်စိတ်ဝင်စားသောအခြားသူမှတစ်ဆင့်သူ၏အသံကိုထုတ်ဖော်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
Wyoming ကိုသင်၏ LLC ဖွဲ့စည်းရန်ရွေးချယ်ခြင်းသည်သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်တွင်အလွန်ကောင်းသည်။ များအတွက်ဆောင်းပါး၌တည်၏ FX လမ်းMichael Atias သည်အခကြေးငွေများကိုလူကြိုက်အများဆုံးပြည်နယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ နှိုင်းယှဉ်မှုသည်aဝဲမင် LLC vs ဝဲWyoming သည် LLC တည်ထောင်ရန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ သာသက်တမ်းတိုးရန်နှင့်ဒေါ်လာ ၅၀ သက်တမ်းတိုးသည်၊ ဝဲလိုးကုမ္ပဏီမှဒေါ်လာ ၉၀ နှင့်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာ ၃၀၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောသက်တမ်းတိုးရန်တောင်းခံသည်။ နီဗားဒါးတွင်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်နှုန်းထားများရှိပြီးပြည်နယ်အခကြေးငွေဒေါ်လာ ၄၂၅ နှင့်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်များ၊ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်များထံမှဒေါ်လာ ၃၅၀ နှင့်ပြန်လည်သက်တမ်းတိုးရန်မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်များ၏အခကြေးငွေများရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်၏အိတ်ကပ်ထဲတွင်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာ ၂၅၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောဖြစ်သည်။
တရားစွဲမှုမှ Wyoming LLC ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
Wyoming LLC ၏အင်အားအကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုမှာသင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတရားစွဲဆိုမှုများမှမည်သို့ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ပထမ ဦး စွာ၎င်းသည်နိုင်ငံအတွင်းရှိတစ်ခုတည်းသော LLC တွင်သင်ပိုင်ဆိုင်ထားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ပေးသောတစ်ခုတည်းသောပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အခြားပြည်နယ်တစ်ခုနီးပါးတွင် LLC တွင်ဘဏ်စာရင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုရှိထားသည်ဆိုပါစို့။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်ကိုတရားစွဲဆိုသည် ပြောပါ၊ မင်းကသူတို့ကားနောက်ကိုလိုက်သွားတယ် အဆိုပါတိုက်မှုအခြားယာဉ်မောင်းဒဏ်ရာရ။ သူတို့သည်သင်၏အာမခံအဖုံးများထက်သင့်ကို ပို၍ တရားစွဲဆိုသည်။ ပြည်နယ်အများစုတွင်သင့်အနေဖြင့် LLC တွင်၎င်းမှပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းဆည်းသူတစ် ဦး ဦး မှသင့်အားအကာအကွယ်မပေးနိုင်ခင်သင့်တွင်ထိုအဖွဲ့ ၀ င်နှစ် ဦး ထက်ပိုသောအဖွဲ့ဝင်များရှိရမည်။ Wyoming LLC ဖြင့်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပြprovisions္ဌာန်းချက်များကျန်ရှိနေသေးသည့်တစ်ခုတည်းသောအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါကပင်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုခြံစည်းရိုး၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်ဖြစ်ပျက်ဟုဆိုသည်။ Wyoming LLC တွင်သင်ပိုင်ဆိုင်သောအိမ်ခြံမြေတစ်စုံတစ်ယောက်သည်ချော်လဲခြင်းနှင့်ကျသည်။ LLC သည်အတားအဆီးတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးကုမ္ပဏီတွင်တရားစွဲဆိုမှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းဆည်းမှုမှကာကွယ်နိုင်သည်။ ဒါဆိုမင်းရဲ့အိမ်၊ မင်းရဲ့ကားပါ ဘဏ်အကောင့် ကုမ္ပဏီဆန့်ကျင်နေတဲ့တရားစွဲဆိုမှုကနေလုံခြုံဖြစ်ကြသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများသာအန္တရာယ်ရှိသည်။ စကားမစပ်၊ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်စီးပွားရေးပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည့်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးနည်းဗျူဟာများရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းခေါ်ပါ
The Wyoming LLC သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအထိရောက်ဆုံးနှင့်အကုန်အကျသက်သာသည့်ပြည်တွင်းပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ်းလွန်ကမ်းခြေရှိနိုင်ငံတကာပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးယုံကြည်မှုနှင့်ကရစ်ဘီယံရှိ Nevis LLC ကဲ့သို့သောပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးကိရိယာများရှိသည်။ သို့သော်အမေရိကန်အခြေစိုက်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးအတွက် Wyoming LLC သည်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ကိုင်ရန်မှာအချိန်နှင့်အားစိုက်ထုတ်ရုံသာမကပိုက်ဆံများစွာလည်းလိုသည်။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်နေ့စဉ်ကုန်ကျစရိတ်များအပြင်သင့်တွင်အခွန်ကောက်ရန်ရာသီလည်းရှိသည်။ အခွန်အခရာသီကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိခြင်းသည်သင်နှင့်သင်၏ကုမ္ပဏီအားအခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်တတ်နိုင်သမျှဝင်ငွေကိုတတ်နိုင်သမျှသိမ်းထားနိုင်သင့်သည် Wyoming LLC အခွန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
တစ်ခုဆောင်းပါးမှာတော့ NOLOဒေးဗစ်အမ် Steingold က LLC ၏နှစ်စဉ်တင်သွင်းမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖော်ပြသည်။ Wyoming တွင်ပါဝင်သော LLCs အားလုံးသည်လိုင်စင်ခွန်လိုအပ်သော်လည်း LLCs အားလုံးသည် Wyoming လုပ်သောပြည်နယ်အခွန်သက်သာခွင့်များကိုမရပါ။ ၀ ိုင်မင်သည်ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းဝင်ငွေခွန်မရှိသည့်ပြည်နယ်အနည်းငယ်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုလိုသည်မှာအခွန်အခရာသီရောက်မည်ဆိုပါကပြည်နယ် ၀ င်ငွေခွန်များကိုလုံးဝပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သုည။ ဇိုင်းလ်
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ၀ င်ငွေခွန်မရှိသောကြောင့် Wyoming တွင်တည်ထောင်သော LLC များသည်များသောအားဖြင့်၎င်းတို့ရရှိသော ၀ င်ငွေအပေါ်ပြည်နယ်အခွန်များပေးရန်မလိုပါ။ Wyoming LLC များအခွန်စည်းကြပ်ရသည့်တစ်ခုတည်းသောအခွန်မှာနှစ်စဉ်လိုင်စင်အခွန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာသင်တိုင်းပြည်တွင်အနိမ့်ဆုံးနှုန်းဖြစ်သည်။ Wyoming ရှိသင်၏ LLCs ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးသည်ဒေါ်လာ ၅၀ (သို့) ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။
ဆိုလိုတာကဒီနှစ်အကုန်ပိုင်းမှာမင်းရဲ့အကောင့်ထဲကိုအများကြီးကျန်တော့မယ်ဆိုတာဆိုလိုတာကသင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်တိုးတက်မှုဆီသို့ ဦး တည်နိုင်သည့်ငွေများ။
အိမ်ခြံမြေသည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကသင့်ကုမ္ပဏီအတွင်း၌ထည့်သွင်းရန်သင့်တော်သောပြည်နယ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အရေးကြီးသောစဉ်းစားသုံးသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ The အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဘလော့ဂ် Wyoming၊ Delaware နှင့် Nevada တို့၏ပြည်နယ်များကိုထည့်သွင်းရန်နှိုင်းယှဉ်သည်။
သင်သည်မည်သည့်ပြည်နယ်တွင်မဆိုဂုဏ်သတ္တိများလှန်ရန်စီစဉ်နေလျှင်၊ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ Wyoming LLC သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ပြည်နယ်နှင့်အဆက်မပြတ်အဆက်အသွယ်ရှိပါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပေါ်နေသောပြည်နယ်နှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်မှတ်ပုံတင်ရမည်။ ဤသည်ဥပမာ, ငှားရမ်းအိမ်ခြံမြေများအတွက်အမှုဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်လှန်လှောဂုဏ်သတ္တိများတစ်ခုတည်းဖြစ်ပျက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည် Wyoming LLC ရှိအိမ်ခြံမြေကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ လှန်လိုက်ပြီး LLC ကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်နောက်ထပ်ထပ်ဆင့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုလှန်လှောရန်စီစဉ်လျှင်၎င်းသည်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်မှတ်ယူနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။
သင်သည်အခြားပြည်နယ်တစ်ခုတွင်ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါကပြောင်းရန်နောက်ကျလွန်းသည်။ Wyoming ဥပဒေဖြင့်ပြည်နယ်သည် LLC သည်အမြဲတမ်း Wyoming တွင်ထိန်းသိမ်းထားသောတရား ၀ င်ဖန်တီးမှုကိုဖန်တီးပေးသည့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရှိသည်။ မူလမှတ်ပုံတင်ရက်စွဲသည်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်မပျက်မကွက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သမိုင်းကြောင်းရှည်နှင့်တည်ရှိပြီးတည်ထောင်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုဆက်လက်ခံစားနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ Wyoming သည်အထွေထွေစီးပွားရေးလိုင်စင်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်၎င်း၏ LLC ပိုင်ရှင်များ၏အမည်ဝှက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။
သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတာနဲ့ Wyoming အတွက်ထည့်သွင်း သင့်အတွက်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ချင်တယ်။ Justia အမေရိကန်ဥပဒေ အတော်လေးကျယ်ပြန့်ဖတ်သော Wyoming လီမိတက်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေ၏တစ်ခုလုံးကိုစကားထွက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ အရာတခုလုံးကိုဖတ်ရန်သင်အချိန်မရှိသောကြောင့် - သင်၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိရန်သတိရပါ။ - ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အခြေခံအချို့ကိုနားလည်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည် Wyoming LLC ဥပဒေများ.
LLC ဆိုသည်မှာအသင်း ၀ င်များနှင့်သီးခြားဖြစ်သည့်အသင်း ၀ င်များအားအကာအကွယ်ပေးသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ လူတ ဦး တည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောကဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်တရားဝင်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆိုလည်ပတ်နိုင်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအမြတ်အစွန်းအတွက်အမြတ်အစွန်းအဖြစ်အသုံးချနိုင်သည်။ ဒါဟာထာဝရကာလရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာကသက်တမ်းတိုးတာကိုနောက်ဆုံးအခြေအနေထားရင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မရှိဘူး။ LLC အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောနာမည်ကို LLC မှသီးသန့်အသုံးပြုရန်အတွက်သတ်မှတ်ထားပြီး၎င်း၏အခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ထားသည်။
အဖွဲ့အစည်း၏ဆောင်းပါးများသည် LLC ကိုဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်သောကန ဦး ထုတ်ပြန်ချက်များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းကိုမှတ်ပုံတင်ထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်မှခန့်အပ်ရန်အတွက်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်တွဲဖက်သင့်သည်။ နှောင့်နှေးသည့်ရက်ကိုသတ်မှတ်မထားပါကအဖွဲ့အစည်း၏ဆောင်းပါးများသည်ထိရောက်လာသောအခါ LLC ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ LLC အတွင်းရှိစီးပွားရေးကိစ္စများကိုလမ်းညွှန်ရန်လုပ်ငန်းလည်ပတ်သဘောတူညီမှုလိုအပ်သည်။ ၎င်းသဘောတူညီချက်ကို Wyoming Limited Liability Company Act ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။
ကမ္ဘာကြီးသည်သင့်တွင်ရှိရာကိုလိုအပ်သော်လည်းသင်၏စီးပွားရေးခရီးစဉ်၌တစ်ယောက်တည်းနေစရာမလိုပါ။ သင်နှစ်ပေါင်းများစွာသင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်ပါကယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ္ourာရေးအကြံပေးတစ် ဦး နှင့်စကားပြောပါ။ မနက်ဖြန်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုစတင်ခံစားနိုင်ရန်သင်၏ Wyoming LLC ကိုယနေ့တည်ဆောက်နိုင်သည်။ သင်၏အကူအညီဖြင့်သင်၏ကာကွယ်မှုနှင့်ဘဏ္andာရေးအရသင်ဝင်ရောက်လာသောမည်သည့်အရာအတွက်မဆိုသင်အနေဖြင့်ကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။
သင်၏စီးပွားရေးအတွက်မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ကြောင်းသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိအတိုင်ပင်ခံများကိုယုံကြည်ပါ။ ထို့နောက်သင်အမှန်တကယ်အရေးကြီးသည့်အရာ - သင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လုပ်နေသောခြားနားချက်ကိုအာရုံစိုက်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးမေလ 27, 2021 ရက်တွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်